Su'aalaha inta badan la is weydiiyo - BBC News Somali
Su'aalaha inta badan la is weydiiyo
Su'aalaha la is waydiiyo ee ku saabsan soo dajinta Maqalka iyo muuqaalka ee telefoonada ganacta
Maxaa loola jeedaa AV? AV waxay u taagan tahay (Audio) oo maqal ah iyo (Video) oo ah muuqaal.
Sidee u daawan karaa ama u dhagaysan karaa AV anoo isticmaalaya telefoonka gacanta? Si aad u daawato video-yadeena ama aad u dhagaysatay qodobada dhagaysiga ama maqalka ah, waxaad u baahan tahay qalab ay telefoonka gacanta is qaadan karaan. Waxaa kaloo aad u baahan tahay in uu u qaabayso SIM card in uu heli karo xogta iyadoo loo soo marinayo GPRS ama WAP. faahfaahin dheeraad, la xiriir shirkad telefoonkaaga.
Waa maxay qaababka laga hei karo bbcworldservice.com? Bogeena Mobile-ka waxaad ka heli kartaa: same same Iyadoo la marayo bogeena Desktop-ka waxaad naga heli akrtaa: - RealMedia Windows Media
Waa maxay qiimaha? BBC lacag kaama rabto si aad soo dajisato file maqal ah ama mid muuqaal ah. Hase yeeshee shirkadda aad adeegsanayso ayaa dhici karta in ay lacag kugu dalacdo in la eg xogta aad isticmaasho. Hadii aadan hubin qiimaha xog soo dajinta fadlan la xiriir shirkadda maamusha internet-kaaga ka hor intaadan ku sii socon.
Ilaa intee ayay qaadanaysaa in aad file dajisato? Waxay ku xirnaanaysaa xawaaraha xogtaadu ugu xiran tahay internet-ka. Xaaladaha caadiga ah, file waa in uu soo dagaa daqiiqad ilaa laba daqiiqo gudahood.
Sideen u dhagaystaa qodob maqal ah? Si fudud u dooro file-ka dooqaaga ah, marka aad dhamayso soo dajinta, file waxaa dhici karta inuu bilaabo si toos ah in loo maqli karo, hadii uusan bilaaban, tag halka aad ku kaydisay iskuna day in aad halkaa ka bilowdo. Xusuusnow in hadii aad kaydisay fariimo badan oo qoraal ah, muuqaallo ama video oo maskaxda qalabkaagu ay buuxdo, waxaa dhici karta in lagaaga baaho in aad tirto faylasha qaar si aad boos uga hesho.
Raac isla tusaalahaas kore si aad u dhagaysato qodob dhagaysi ah.
Suurtagal ma tahay in la hagaajiyo tayada dhawaqa? Caadiyan tayada dhawaqa ee telefoonada gacanta sameecada ku xiran ayaa hooseeya, sidaa darteed waxaan ku talinaynaa in la isticmaalo qalabka dhagaha. Ma ii soo diri kartaa halka aan ka gali karo bogga guud ee BBC World Service qaab fariin qoraan ah. Maya, sidan lama yeeli karo.
Ma ka gali karaa BBC Radio si waqtiga la socota telefoonkayga gacanta? Hadda ma hayno AV waqtiga la socda oo loogu talogalay qalabyada telefoonada gacanta.
Ma heli karaa iPlayer BBC telefoonkayga gacanta? Aqbaarta ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ee aad ka gali karto BBC iPlayer iyo kan sidoo kale loo adeegsan karo soo dajina barnaamijyo toos loo daawaco, fadlan booqo bogan: http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/mobile/mobile_phone